‘We won’: a divisive activist’s role in remaking Ethiopia – Kichuu
HomeNewsAfrica‘We won’: a divisive activist’s role in remaking Ethiopia
© AFP | Jawar Mohammed, a prominent Oromo activist and director of the United States-based Oromia Media Network (OMN), returned to Ethiopia in August after the country withdrew coup plotting charges it had filed against him in 2017
ADDIS ABABA (AFP) -(france24)——Jawar Mohammed was once so hated by the Ethiopian state that the media activist was accused of coup plotting while viewers of his anti-government broadcasts were hunted down.
Wanti garii gariin turtee nama qaanessiti. Abiyyiin ወራዳ /salphataa jechuun sun gaarii miti. Jawar Mohammed yo duraan dhiifama gaafatee hin jiranne muummicha dhiifama gaafachuu qaba. Abiyyi namni MM ta’a jedhee eege osoo hin jiraatin akkasuma arrabsamaatuma Muummicha Ministeeraa ta’e.